KOBCIN LABO LABAAD (MEADOWSWEET): SHARCIYADA GUUD EE BEERASHADA IYO DARYEELKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koriyo labajir ee beerta?
Meadowsweet waa jeexan dilka ah oo leh guryaha dawooyinka. Laakiin intaa ka sokow, isagu sidoo kale waa mid aad u qurux badan.
Meadowsweet (ama meadowsweet) waa cawska dilka ah oo leh dhererkeedu yahay 60-80 cm oo leh dabo toosan. Wakhti dheer oo aan cidina loo aqoonsanin noocyada kala duwan ee loo yaqaan "Spirey". Hadda waxaa loo qoondeeyey cayayaanka gaar ah, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan.
Iftiin yar oo iftiin jilicsan illaa 1 cm oo ah dhexroorka muuqaalkeedu yahay 15 cm dhexroor. Caleemaha waa ballaaran, qallayl, waxoogaa ferns ah.
Sababtoo ah miisaankooda xagaaga xagaaga, waxay uumi baxaan biyo badan. Noocyada qaarkood ee meadowsweet, waxay si ku meel gaar ah u qalajiyaan muddada kulul si loo yareeyo uumiga. Meadowsweet wuu leeyahay rhizomes gaaban. Sannadkan, xididdadaas waxay koraan wax ka badan 2-3 cm.
Meadowsweet wuxuu leeyahay ur wanaagsan oo malab-almond ah. Blooms xagaaga hore iyo blooms for 1.5 bilood.
Ma taqaanaa? Meadowsweet (inflorescences) waxaa lagu daadi karaa shaah (waxay leedahay dhadhan wacan iyo caraf udgoon)
Duurjoogta, xoortay geeduhu waxay ku koraan aagagga caanka ah, badanaana waa xeebaha jidhka ee kala duwan. Waxa kale oo laga helaa kaymaha, buuraha buuraha iyo cawska.
Xaafadaha ayaa aad u balaadhan - Aasiya, Caucasus, dhul-beereedka Europe, sidoo kale waxaa laga helaa Siberia. Foomamka ciriir weyn oo ballaadhan oo gaari kara boqolaal hektar.
Next, waxaan tixgelinnaa waxyaabaha gaarka ah ee sii kordhaya Labaznika - beerto iyo daryeelka ee bannaanka u furan, sawirrada sariiraha ubax leh meadowsweet.
Goobta qoyan, qoyan, laakiin aan lahayn goobaha biyuhu ay ku habboon yihiin. Haddii biyaha dhulka ku soo dhowaado ciidda, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la abaabulo sariir sarreysa leh biyo fiican. Waxay ku kori kartaa meelo hadh ah, laakiin ma u dulqaadan la'aanta qorax la'aan. Sidaa darteed, waxaa fiican in la doorto meelaha ay si fiican u iftiimayaan qorraxda ama leh penumbra iftiinka dhirta deriska ah.
Meadowsweet ma sameyso shuruudo gaar ah oo ku saabsan ciidda. Laakiin waxaa fiican in ay u koraan in dhex dhexaad ah, bacrin ah. Xannuunta acidic, ku dar lime ama ash si ay u noqdaan dhexdhexaad. Ka hor inta ay beerto waxay faa'iido u tahay in la sameeyo humus ama compost.
Ku dar ciid si carrada culus - dheecaan wanaagsan ayaa looga baahan yahay meadowsweet. Isku qasiso qiyaasta 1: 1.
Meadowsweet soo degaya
Meadowsweet waxaa lagu beeray dhowr hab oo kala duwan: abuurka, qaybinta baadiyaha, qaybaha rhizomes.
Seeds waxaa lagu beeray xilliga qaboobaha adoo adkeynaya iyo qalajinta. Ka hor inta beerto, nadiifi meesha koritaanka ka soo haray oo qoyan.
Seeds waa jilicsanaanta, sidaas darteed dooro meel loogu talagalay biqilka. Ka dib markii caleemaha ka muuqdaan, geedo waxaa lagu beddeli karaa meel koritaanka joogto ah.
Qoto dheer ee beerto waa in aan ka badnayn 5 cm, haddii kale, geedka kaliya ma jebin karo dhulka. Marka beero, ku hayn fogaan ah 30-40 cm u dhexeeya duurka. Tani waxay u oggolaaneysaa inay si caadi ah u koraan oo aan la tartameynin.
Bartamihii Abriil - horraantii May, caleemaha ayaa soo baxaya. Waxay si tartiib ah u koraan, dhammaadka dayrta waxay badanaa leeyihiin ilaa 5 caleemo. Foomkan, waxay qaboobaan barafka.
Ubaxa ugu horeeya ee meadowsweet ayaa lagu arki karaa 2-3 sano kadib muuqaalka sprouts. Haddii xaalado aan fiicnayn ee koritaanka la abuuray, muddada ka hor inta ubaxku si weyn u kordhi karaa.
Waxaad abuuri kartaa abuurka guga. Tani waxay lagama maarmaan tahay in lagu rusheeyo kiciyaasha kobcinta ("Zircon", "Novosil"), ixtiraamka qoyaanka ciidda iyo shucaaca dabiiciga ah ama dabiiciga ah. Weli waxaa jira khatar aad u sareysa in miraha aan korin. In kasta oo xaqiiqda ah in biqilka soconayo ilaa lix sano, inta badan waa wax aad u hooseeya. Waxay ku xiran tahay meesha beerashada, iyo meesha ururinta.
Waa muhiim! Geedaha lagu beeray miraha guga guga ayaa si tartiib tartiib ah u koraan, ubaxna ka dib 3-4 sano kadib.
Sida aad arki karto, qaabkani ma kuu oggolaanayo inaad si degdeg ah u hesho beerta ubaxu. Waxay sidoo kale halis u tahay sababo aan macquul ahayn koritaanka abuurka. Sidaa darteed, markasta oo ay suurtogal tahay, waxaa fiican inaad bixiso doorasho habka dhalmada.
Waxaa suurtogal ah in loo kala qaybiyo baadiyaha guga horraantii (Maarso-Abriil), ama dayrta, ka dib ubax. Laakiin xusuusnow inta lagu jiro xilliga beeridda guga ka hor inta ubaxu noqon doono wax ka badan haddii aad ku beeri dhirta dayrta.
Rhizomes waa la jarjarey. Waxaa ugu wanaagsan in aad isla markaaba iska dhaafto. Haddii tani aysan macquul ahayn - xididaha jiilaalka oo idil carrada qoyan ama balka.
Qalabka waa in lagu dhex beeraa masaafada ugu yaraan 50 cm midba midka kale. Qoto dheeraynta xajmiga - aan ka badnayn 5cm. Geedka xididdada ah ku dheji, oo leh dusha sare ee kelyaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero qoyaanka iyo daahirsanaanta ciidda u dhow dhirta dhalinyarada. Xaaladaha soo haray - dheecaan, qoyaan - hana isbeddelin.
Iyada oo habka this dhalmo, dhirta qaato xidid ka fiican, iyo ubax dhacaan hore.
Sida loo daryeelo cidlada
Inkastoo qaar ka mid ah bur-burinta marka ay ka soo baxaan abuurka, haddana way fududahay.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee daryeelka wanaagsan ee meadowsweet waa waraabinta saxda ah. Waa inay ahaato mid ku filan, laakiin ma ahan mid xad dhaaf ah. Waxay ku filan tahay in ay si fiican u cabbaan toddobaadkii hal mar.
Waa muhiim! Iska ilaali biyo taagan oo ku dhow xididka geedka. Tani waxay keenaysaa muuqaalka cudurada fangas.
In ciid wanaagsan ee quudinta aan gaar ahaan loo baahan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ah in lagu taliyo dalabka organic ama macdanta (superphosphate, potassium sulfate) Bacriminta 1-2 jeer xilli ciyaareed. Ha ku dhaafin bacriminta nitrogen. Kadibna ubaxu wuxuu bilaaban karaa waqti dambe.
Si loo hubiyo aragti qurxoon ee warshadda, si joogto ah u jajabiso inflorescences ubax. Waxaad ku xiri kartaa gacanta, ama gooyaa laamaha qalalan.
Meadowsweet - warshad aad u qabow u nugul. Ka hor inta aanuu barafoobin, samee warshad caleemo hooseeya, ka tag masafada 5-10 cm, ka saar nasashada. Iyo foomkan meadowsweet ayaa si buuxda u badin doona, hoy la'aan. Meelaha leh dhirta adag, daboolaya ubaxa leh lakabka peat ama compost (10 cm dherer) ma noqon doonto mid aad u macquul ah.
Wax yar oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee warshadda
Daawo dhaqameed iyo mid aan rasmi ahayn waxay tixgelin siinayaan wakiilka wanaagsan ee anti-bararka iyo bakteeriyada. Waxaa loo tixgeliyaa daaweyn afartan jir ah. Waxa kale oo uu leeyahay antitumor xoog leh iyo waxyeelo immunomodulatory ah.
Herbalists waxay tixgelinayaan qulqulo daadsan sida daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay hargabka iyo ifilada. Intaa waxaa dheer, waxay xakameysaa aysidhka, iyo faleebo ee ubax yareeyo xummad. Intaa waxaa dheer, faleebadani wuxuu yareynayaa halista xinjiro dhiig.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, Labasnik ayaa loo tixgeliyey warshad ilaalisa. Si aad uga takhalustid dadka xun, si aad naftaada uga ilaalisid jinniyo shayddaanka ah, ku qaado shayada Labaznika - xididada ama asliga ah.
Sidaa darteed, waxaad ka heshay meadowsweet, xeerarka koritaanka iyo daryeellaha, waxay arkeen sawir iyo akhrin sharaxaad ka mid ah meadowsweet. Geedkaaga ku dhaji, iyo, marka lagu daro muuqaalka cajiibka ah, waxaad sidoo kale helaysaa daaweyn wanaagsan oo cudurro badan ah. Iyo for beekeepers sidoo kale warshad malab cajiib ah.